Sweden Gothenberg Airport kpọpụrụ mgbe enyo ngwugwu na-egosi "na-egosi nke na-agbawa agbawa"
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Sweden’s Gothenberg Airport kpọpụrụ mgbe enyo ngwugwu na-egosi “na-egosi nke na-agbawa agbawa”
Airlines • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • News • Akụkọ na -agbasa ozi Sweden • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem
Sweden’s Gothenberg Airport kpọpụrụ mgbe enyo ngwugwu na-egosi “na-egosi nke na-agbawa agbawa”
A kpọpụla ọdụ ụgbọ elu Sweden mgbe akpa achọtara na ebe ahụ gosipụtara ihe ngosi na o nwere ihe mgbawa, dị ka akụkọ mgbasa ozi mpaghara si kwuo.
A kpọpụla Gothenberg-Landvetter Airport, nke dị na mpụga ndịda obodo Sweden nke Gothenberg ka ndị uwe ojii na-enyocha ngwugwu a na-enyo enyo.
Flightgbọ elu ikpeazụ na-apụ n'ọdụ ụgbọ elu ahụ na-ejide ya na tarmac.
Mgbe ọ na-agwa TT News Agency okwu, Anders Porlieus, onye isi mgbasa ozi maka onye ọrụ ụgbọ elu Swedavia kwuru, sị: “Anyị mere ọkwa maka akpa ahụ mana ọ nweghị onye bịara maka ya. Nnyocha ahụ mechara gosipụta ihe mgbawa. ”
Ndị uweojii ekwupụtala na ha ga-agba gburugburu ebe dị mita 200 (650ft) gburugburu akpa ahụ.
Göteborgs-Posten na-akọ banyere ọnụnọ ndị uwe ojii siri ike na ọdụ ụgbọ elu na mpaghara ndị gbara ya gburugburu, ebe ntụgharị okporo ụzọ si na mpaghara ahụ dị ugbu a.
Otu ọnụ na-ekwuchitere ndị uwe ojii gosipụtara GP na otu ndị na-atụ bọmbụ ga-enyocha akpa enyo, mana ndị isi enweghị ihe ọmụma banyere iyi egwu bọmbụ ọ bụla.
Esgbọelu ga-aga n’ihu n’ọdụ ụgbọ elu dị ka ọ dị na mbụ, Nyman gwara Expressen, ka a gwara ndị njem ka ha were akpa ha site n’otu ọdụ ụgbọ mmanụ dị nso.